Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » WEB DEVELOPERS ZONE » » Blogging » Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem]
1 Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 15th May 2010, 5:40 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 52
တညျနရော : ပုသိမ်မြို့
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-01-09
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 2
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 53
ကျနော်ထောင်ထားတဲ့ နိူင်းဝဘ်ဆိုဒ်လေးတော့ မကြာခင်
ကူညီကြပါနော် [You must be registered and logged in to see this image.]
Last edited by solakoko on 22nd May 2010, 7:23 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Topic အသစ်ခွဲထားသည်။)
2 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 15th May 2010, 8:34 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 105
တညျနရော : မြို့တော်ရန်ကုန်
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-04-22
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 11
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 143
ကို chan.virus ရေ ..... ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ နောက် ထပ် hosting တစ်ခုကို ရှာလိုက်တော့...... ning ထောင်တဲ့ လဒလေးတွေက လောဘတက်နေပြီဗျ..... ပိုက်ပိုက် တောင်းနေပြီ....... အပိတ်မခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ပိုက်ပိုက်တွေ လောင်းလိုက်တော့........
3 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 16th May 2010, 6:29 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 104
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-13
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 13
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 142
ရေ အကောင့်အသစ်ပြန်လုပ်ပီး ကိုယ်နောက်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ password နဲ့ Recovery email
4 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 16th May 2010, 9:47 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 3
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-09-01
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 3
5 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 17th May 2010, 8:52 am
ⓃⓖⒶ ⓢⒶ ⓛⓊ
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 375
တညျနရော : (๏_1η∂єχ.ρнρ_๏)
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-12-12
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 25
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 492
BruteForce တွေသုံးကြည့်ပါလား .. စိတ်ရှည်ရှည်တော့ထားပေါ့ [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 17th May 2010, 3:31 pm
ဟုတ်တယ်ဗျို့...Ning ကပိုက်ဆံတောင်းနေပီဗျ..ကျွန်တော်တို့ Multiply.com ကိုလာပါလား
ဒါမှ မဟုတ် wordpress နဲ့လုပ်ကြည့်လေ..ဖရီး လိုင်းတွေအများကြီးဘဲ..
7 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 18th May 2010, 11:58 am
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 27
တညျနရော : on earth
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-02-22
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 41
BruteForce ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ အစ်ကို
8 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 18th May 2010, 12:16 pm
အေးဆေးလူ wrote: BruteForce ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ အစ်ကို
ကျနော်ဝင်ရှင်းရင်လဲ ရှုပ်သွားမှာ စိုးလို့ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ အကိုရေ
9 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 18th May 2010, 3:33 pm
လူတွေများလာမှ ပိုက်ဆံတောင်းတယ်ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.]
10 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 18th May 2010, 3:45 pm
တခုတော့ရှိတယ်ဗျ..Multiply.com က Java Script သုံးလို့မရဘူးဗျ..
ကျွန်တော်လက်ရှိ ၀က်ဆိုက် ကို Multiply နဲ့ရေးနေတာပါ...
CSS တော့သုံးလို့ရတယ်..Java script သုံးချင်ရင် Blogger မှာဝင်ရေး
Free Site ဘဲ Word press နဲ့ လုပ်ချင်ရင်တော့ ကို Mars ကိုမေး...
11 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 18th May 2010, 4:30 pm
ဒီပို့စ်ကတော့ ချော်နေပြီနဲ့တူတယ်... ငါလည်းပြန်ထွက်ခါနီးမှတွေ့တယ်.... လုပ်ပေးလိုက်ပါဦးနော်... အားရင်ပြန်လာပြီးလုပ်ပေးမယ်... အခုတော့ထွက်ပြီ...
12 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 18th May 2010, 4:57 pm
blogger ဆိုတာ နည်းနည်းရှင်းပြပါလားဗျာ
[You must be registered and logged in to see this link.] လား
[You must be registered and logged in to see this link.] လိုလေ။။
13 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 18th May 2010, 5:00 pm
14 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 18th May 2010, 5:23 pm
ဟုတ်တယ်လေ... အဲလိုပဲလေ... သူက အီးမေးရှိယုံနဲ့ ကိုယ်ပိုင် blog တစ်ခု လုပ်လို့ရတယ်... ဒါပေမယ့် မြန်မာမှာတော့ ပိတ်ထားတယ်လို့ပြောတာပဲ...
15 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 18th May 2010, 7:22 pm
multiply ကတော့ မပိတ်ထားဘူး .....နဲနဲ ကွန်လေး တာ ပဲ ရှိတယ် .... ဖွင့် လိုက် လို့ရှိရင် တော် ရုံတန်ရုံ ဆို မတက် တော့ ဘူး... အဲဒါတော် တော် ဆိုးတယ်... ဘလော့ဒ် ရေးမယ် ဆိုရင် ကျနော် ပေးတဲ့ လင့် ကို စမ်းကြည့် မြန်မာ ဘလော့ဒ် ဆာဗာ တဲ့...... မြန်တော့ မြန်တယ်...
16 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 19th May 2010, 2:06 pm
17 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 19th May 2010, 3:18 pm
ဟုတ်ကဲ့ အကူအညီလိုပါတယ် အကို
ကျနော် register လုပ်တာ
loading လုပ်နေတာနဲ့တင် တစ်နာရီလောက်ကြာနေတယ်
အဲ့သလိုပဲဖြစ်တတ်သလား [You must be registered and logged in to see this image.]
18 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 20th May 2010, 6:52 pm
Saturn God ရေးထားတာရှိတယ်..သူ့ဆိုက်မှာဝင်ကြည့်လိုက်..
မကြည့်ချင်ရင် Email ပေး ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်..
19 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 20th May 2010, 6:58 pm
ဟုတ်ကဲ့ Multiply ကကျွန်တော့်လက်ရှိအကောင့်နဲ့ဝင်တာတောင်လက်မခံပါဘူး..ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်
လား Multiply ကဖြစ်တာလားသေသေချာချာပြောလို့မရပါဘူး..ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ..
ဒါမှမဟုတ် Water ပြောတဲ့ ဒီဆိုက်ကိုစမ်းကြည့်ပါလား..ဒီကောင်ကသိပ်မကြာသေးဘူး..
20 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 20th May 2010, 7:07 pm
TITLE ကြည့်လိုက်တော့ Gmail password မေ့သွားလို့တဲ့......
လွဲတော့လွဲ ကုန် ပြီ.... နဲနဲ လွဲတာ မဟုတ်ဘူးနော်.... တော်တော် လွဲ ကုန်ပြီ.....
ကဲ မင်မင်တော့ ရေ... လုပ်ဦးဟ...
21 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 22nd May 2010, 11:07 am
ဘယ်သူမှလာမပြောကြပါလားနော် [You must be registered and logged in to see this image.]
22 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 22nd May 2010, 6:02 pm
chan.virus wrote: ဟုတ်ကဲ့ အကူအညီလိုပါတယ် အကို
multiply က တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီလို ဖြစ်တက်ပါတယ် အကို...
register အရင်မလုပ်နဲ့ဦး... သူများရေးထားတဲ့ multiply ဆိုက်တစ်ခု ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်....
နာရီနဲ့ အချိန် ကို မှတ်ထားလို့ ဦးနော်... ဘယ်လောက်ကြာလဲ လို့ [You must be registered and logged in to see this image.]
23 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 17th July 2010, 10:33 pm
အကိုရေ Multiply က နက် ဆွဲပါတယ်
ညီလေးကတော့ web.com ကို သုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်
ဒါမှ မဟုတ် အချိန် တွေ ကြာကြီး ရပီး ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့
မှာ အကောင့်ဖောက်ပါ ပီး ရင်
ဆိုဒ်ကြီး တဆိုဒ်စာလောက်ရတာပါ
မိမိ domain .ucoz.ru (.net///.com) အစုံ ရပါတယ် မိမိမ ကြိုက်တာ
တခုတော့ ပါလိမ့်မယ် အဲတာက ucoz.ru ဆိုတာတော့ နောက်မှာ
ပါနေတာ ပဲ .net ,,, .ru ,,,,, .com ဆိုပီး မရပါဘူး
တော်တော် များများ လိုက်ရေးကြည့်ဘူးတယ် Multiply က JAVA ပျားတုတ်ရော
24 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 21st July 2010, 12:04 pm
စုစုပေါငျးရေးသားခကျြမြား : 36
တညျနရော : တောင်ကြီး
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-07-14
ကြေးဇူးတငျခံရမှု : 5
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 61
မှာလည်း ဘလော့အခမဲ လုပ်နိုင်တယ်လို့တော့ အင်တာနက်ဂျာနယ်မှာဖတ်လိုက်ရတာပဲ
25 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 8th August 2010, 3:02 pm
လွဲကာမှလွဲရော ထပ်မေးရဦးမယ်ဗျို့ [You must be registered and logged in to see this link.] မှာ ဘလော့ ရေးနည်းရေးနည်းနည်းလောက်သင်ပေးကြပါလားလို့
26 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem] on 29th April 2011, 6:14 pm
တညျနရော : ရန်ကုန်
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2011-04-28
27 Re: Blogging အခက်အခဲများပြောကြပါ [Problem]